Amahomori - abaqhubi bempilo yethu
Ama-hormone yibo abahamba phambili empilweni yethu, uma sicabanga ukuthi umzimba uyingoma ehambisanayo yama-molecule, ama-athomu namanye ama-chemical compounds. Kuvela emiyalweni yabo ngokuqondile kuxhomeke kubani - "i-violin" noma "ingxabano" - izokwenza okwamanje ingxenye eyodwa. Ngakho ngeke kube buhlungu ukufunda okwengeziwe ngalezi zinto ezingavamile ...
Konke okungena enhliziyweni yowesifazane othakazelisayo umqondo we "masculinity" unqunywa yi-testosterone. Ukukhangwa ngokobulili, ukuzethemba, ukuhlukumezeka ngisho nokukwazi ukuhamba emkhathini kunika isigamu esiphezulu sabantu lesi hormone. Bangabesifazane futhi, kuphela ngobuningi obukhulu. Ngokujwayelekile testosterone (ebizwa ngokuthi i-hormone yobulili) ikunikeza ukusebenza okuvamile kocansi. Ukweqile kungabangela izinkinga ezihlukahlukene. Lokho, isibonelo, njenge-follicle yezinwele ngohlobo lwesilisa: ngenhla kwindebe engenhla kanye nomugqa wesisu, ezinkalweni ngisho nasesifubeni. Ngakho-ke, kungcono ukugcina i-testosterone "isheke." I-hormone yamadoda yonke into efanayo! Ngomqondo wesayensi, i-hormone iwuqhuba umgomo wethu wokuphila, okuthinta isimo jikelele sempilo.
AmaHormoni yibo abaqhubela impilo yethu nenjabulo. Kulokho okuthandayo kakhulu emhlabeni, impendulo "i-hormone yenjabulo." Bakhetha ukuthi siyithandani futhi siyithandayo. "Abagibeli Benjabulo" kwezokwelapha kuthiwa i-endorphins. Uma unayo ngokwanele, ungazicabangela njengomuntu ojabulayo. Ukwanda okunamandla, imizwa emihle emihle, ikhono lokujabulela impilo lizoqinisekisa ukuthi unempilo enamandla, ukuzivikela okuhle nokucindezeleka okuqinile. Ngokuntuleka kwe "hormone yenjabulo", ukudangala, ukunganakwa, ukuzithemba kanye nesifiso esiqhubekayo ngandlela-thile kushukumisa ukukhiqizwa kwe-hormone elahlekile ingenzeka. Kodwa qaphela! "Suck" kuma-endorphins kakhulu, kulula kakhulu. Umkhuba "wokucindezeleka kokudla" uyisiqiniseko esifanele salokho. Izindlela ezisheshayo zokubamba "injabulo" zihlanganisa nokulutha izidakamizwa, ukubhema nokudakwa ngokweqile.
Ngokuqinisekile uyazi lokhu: ukuze uthole i-adrenaline, udinga ukumgijima ngokumangalisayo ekufuneni izintandokazi. Kulungile - leli hormone lazuzwa njengefa kusukela okhokho bethu, okwadingeka bakhuthuke ngokufanele, ukuze phakathi kwe-bronzosaurs nama-mammoth ukuvikela ilungelo labo lokuphila. Ngesikhathi somngcingo we-adrenaline ungena e-Arena futhi "i-razrulivaet" isimo. Ngaphansi kokuqondisa kwakhe, izitsha zangaphakathi zangaphakathi (ezincane) (hhayi kubo manje), kanye nezitsha ezinikezela igazi emisipha, ngokuphambene, zanda, ngaleyo ndlela zinike isibonakaliso: kungadingeka ukulwa. Ukucindezela umsebenzi wepheshana lomzimba, kodwa umsebenzi wobuchopho kanye ne-bronchi uqinisa. Ngokuvamile, umzimba uhanjelwe ukusinda, ukugqugquzela ezinye izitho nokutshala "kwabanye abantu abalambileyo". Ukubuyisela konke okujwayelekile, udinga ukulinganisa ukulindela komzimba nokuhamba. Uma ukhetha ukucindezeleka ukuze uhlale noma "uthathe" okuthile okumnandi "isabelo esingasetshenzisiwe" sizophendukela kuwe. Ngakho uma kungekho "ama-mammoth" afanelekayo ekugcineni, khona-ke kufanele kusungulwe!
"U-Elixir of Youth"
Ngo-1990, ngesandla sokukhanya sikaDkt. Daniel Rudman, ama-hormone okukhula aqala ukubhekwa njengengqikithi "yobusha" obuqotho. Wonke amavolontiya okuhlola abambe iqhaza ekuhlolweni alahle okungenani iminyaka engu-20. Ulahlekile amafutha, amanye abuye ahlwitha imibimbi kanye nombala wezinwele abuyiselwe. Kodwa-ke, emva kokuphela kokuthola i-hormone konke kubuyele kumbuthano ... Maye, ngokuhamba kwesikhathi silahlekelwa leli hormone eliyigugu. Kodwa kungenzeka ukunciphisa inqubo yemvelo. Ukuze kuzuzwe i-hormone yokukhula ukulala okuphelele, ukuvivinya umzimba nokudla okulinganiselwe. Ungakwazi ukubambelela kule "kadokotela" isikhathi eside kakhulu, mhlawumbe ize ososayensi beba nombono ofanayo mayelana nemithi yokukhula "izidakamizwa". Ngesikhathi esifanele, izifundo zibonisa ukuthi kokubili ukunciphisa kanye nokuhlaziywa kwe-hormone yokukhula kuholela emiphumeleni efanayo.
Umsizi wakho othembekile
Ngokuphambene no-testosterone, i-estrogen inesibopho salo lonke wesifazane onalo. Umsebenzi wakhe oyinhloko ukuqinisekisa ukuqhubeka kokuphila, ngakho-ke usinikeza amafomu wesifazane, alungiselela impilo yocansi futhi unikeze isisindo somama. Ngakho-ke isifiso esingunaphakade sowesifazane sokubuyisela ukuhleleka nokunakekela umuntu. U-Estrogen uletha ukuthula emphefumulweni wesifazane, ekunciphiseni ukungezwani nokucindezela ukuhlukunyezwa. Futhi ukhuthaza ukuqoqwa kwamafutha ezindaweni ezithile zabesifazane. Lokhu kungukuthi, ezindaweni lapho kunzima khona ukukhipha, esiswini nasemathangeni. Ngokomqondo wemvelo uma kwenzeka indlala, lezi "zigcini" kufanele zisisize ukuba sithwale inzalo. Kodwa kungcono kakhulu kunokuntuleka kwezingcweti! Lapha wena nesikhumba esivulekile, nezinkinga, nezinwele ezibuhlungu, nezipikili eziphazamisayo. Futhi lokhu akukona konke: ukujuluka, ukuthukuthela, ukuleleka, ukugula ngokweqile, izifo zenhliziyo - yilokho i-hormone yethu yesifazane ivikela kithi!
Noma yiliphi i-hormone liqhuba umgomo wethu wokuphila. Futhi-ke kufanelekile ukujwayela. Kodwa ngakolunye uhlangothi, "ukuseshwa" kwe-estrogen kuma-hormone kuholela ekusenikeni, ukwephulwa kokuya esikhathini, ukwakheka kwezicubu zezitho zangasese. Ngakho umphathe ngenhlonipho futhi uhlole ukuthi izinto zikhona nomsizi wakho. Khona-ke umzimba wakho uzofika ngokuvumelana ngokuphelele nabaqhubi bempilo yakho - ama-hormone kanye nezwe elikuzungezile!
Kuthela amanzi abandayo ngempilo
Ikhanda elixutshwe njalo
Izifo Zesifo Sokudlwengula Kwabesifazane
Indlela yokunciphisa ingozi yomdlavuza
Ukwelashwa kwezemisebenzi enkulisa
Kiss, izinzuzo zayo zezempilo
Ukupheka ngokupheka izitsha kusuka kolifulawa kanye ne-broccoli
Amakhukhi nge-bacon kanye noshizi
Yini ongayinika ingane eneminyaka engu-10 ubudala?
I-aesthetics yezimboni: "izibani" zomoya
Umphumela wemisindo ekuzwa kwabantu
I-Porn: umlando wemikhiqizo ethandwayo
Cottage ushizi casserole ngamakhambi
I-pasta ne-caulifulawa ne-parsley
Indlela yokugqoka abakhulelwe ebusika